» ‘विपद् पत्रकारिता’ सार्वजानिक
३० भाद्र २०७६, सोमबार १९:३१ प्रकाशित
काठमाडौं, भाद्र ३० – विपद्का बेला प्रभावित समुदायलाई धेरै थरीका जानकारी आवश्यक पर्छ । के भयो ? अब के गर्ने ? सुरक्षित स्थान कहाँ छ ? कसलाई सम्पर्क गर्ने ? के गर्ने ? के नगर्ने ? यी प्रश्नका जवाफ तत्काल सञ्चारमाध्यमबाट आउन सक्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकालगायतले दिने सूचना विपद् प्रभावितका लागि पहिलो राहत हुने गर्दछ ।
पुस्तकका लेखक श्रीधरण, थोर्सन र शर्माले सङ्क्षिप्त धारणा राख्दै विपद्मा पत्रकारिताले जीवन बचाउन सक्छ, जीवन कसरी बचाउने भन्ने ध्येय पुस्तकले राखेको छ भन्नुभयो ।शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारीले अहिले पनि नेपाली सञ्चारगृह विपद् जोखिमका क्षेत्रमा संवेदनशील रहेको चर्चा गर्दै पुस्तकले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्छ भन्नुभयो ।